Chengetedza HomeKit kubva kuApple Watch yako neWristControl | Ndinobva mac
Chengetedza HomeKit kubva kuApple Watch yako neWristControl
Kana iwe uchida kutamba neimba otomatiki uye uine akati wandei zvishongedzo HomeKit yakaiswa mumba mako, chinowanzoitika chinhu kudzora system ne iPhone yako. Asi kazhinji iwe unacho kuchaja, uye kana iwe uri mune imwe kamuri, kana iwe uchishevedzera paKo HomePod, kana uinayo, kana iwe unoshandisa iyo "Kumba" app pane yako Apple Watch.
WristControl chinhu chakanaka chechitatu-bato chishandiso chinonyanya kushandisa mikana yekudzora yako HomeKit zvishongedzo kubva kune yako Apple Tarisa zvakanyanya kupfuura iko iko Apple application.
WristControl ndeyechitatu-bato kunyorera kweApple Watch iyo inobvumidza iwe kudzora ese ako HomeKit zvishongedzo uye zviitiko zviri nani zvakanyanya kupfuura «Casa»Native kuApple. Ma skrini ayo akajeka, anoshanda sezvaunotarisira uye inogadziriswa zvizere.
MuWristControl iwe unayo matatu matatu yekushanda nayo; Zviitiko, Zvinodiwa uye Zvese. Zvese zvinhu zvine hungwaru uye iwe urikuda kuisa ako anonyanya kushandiswa zvishongedzo muFavorites nekuda kwezvikonzero zviri pachena. Zviitiko zvinogona kubata chero chiitiko chakatogadzirirwa mu «Imba» kunyorera.
Scenes: Wedzera chero chiitiko chiripo cheKeKeKit uye wochimisikidza nekapombi nyore. Iwe unogona kusarudza pakati peye compact grid yekutarisa nemifananidzo chete, kana imwe yakajeka rondedzero yekutarisa nemazita enzvimbo
FavoritesSarudza kubva pane zvinowirirana zvishongedzo zvekukurumidza kuwana. Tinya pazvishongedzo kuti ubvise kana kudzima.
Todo: Zvese zvinowirirana zvishongedzo zvinoratidzwa pano, asi iwe unogona kuviga chero kana uchida
Kune ese maficha uye zvishongedzo zvaunogona kusarudza kubva pane zvinopfuura 270 mifananidzo zvakasiyana Chiitiko chega chega chinogona kushandurwa kuita chinetso, uchishandisa kuomesa kuvhura mashandisiro anozoita otomatiki mamiriro acho. Iko manejimendi akazara eako HomeKit pane iyo Apple Watch. Unogona kudhawunirodha WristControl kubva App Store yeApple Tarisa nemutengo we2,29 MaEuro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Chengetedza HomeKit kubva kuApple Watch yako neWristControl
Apple inosimbisa iyo mamiriro kune vatatu mapato vanoda kutengesa muApple Chitoro
Kambani yekugadzira yaHillary Clinton inoda kuramba ichishanda neApple TV +